Finfinne- Oromia: This is a tree planted by OLF leader, Dawud Ibsa; This tree will be named as “Oromo Liberty Tree”. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosFinfinne- Oromia: This is a tree planted by OLF leader, Dawud Ibsa; This tree will be named as “Oromo Liberty Tree”.
[Oromedia-29 Waxabajjii 2020] Jaal Abdii Raggaasaa fi Oromoonni isa waliin hidhaman kudha lama mana murtii Godina Addaa Naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaatti dhihaatan.
Dhaddacha har’aatiin guyyaan baallamaa Oromoota kaanii dhumateera.
Poolisiin garuu jaal Abdii Raggaasaa irratti ammas yeroo qorannaa dabalataa gaafatee ture.
Dhaddacha kana irratti jaal Abdiinis akkas jedhan:
“Anaan ilaalcha siyaasaa kiyyaaf waan na hidhaniif murtii barbaaddan murteessaa malee akkanumaan nan deddeebisinaa.”
Manni murtiis galmee namoota kaanii cufeera.
Jaal Abdii Raggaasaa immoo Roobii dhufutti baallamee jira.
YAA MUKAA QOOTOO NAGAASAA KUMSAA NEW AFAN OROMO MUSIC VIDEO 2020
Daalee, beennacha koo!
Seenaa kee saba bal’aatu raga!!
Nuti warra afaaniin nu soban, gochaan nu goban miti.
“Oromummaa namni naaf kennuus ta’e narraa fudhachuu hindanda’u” kan namticha Abiy jedhan sanatu dubbate. Waanti tuffatan gatii anma baasifti. Kun Gatiin xiqqaa dha.
Kan jennu garuu, baandaan Oromummaa hin qabdu. Oromummaan qabeenya waloo, warra saba Oromootiif quuqamanii fi wareegamanii ti; Oromummaan qabeenya waloo Oromoo, kan haqa, dhugaa, dantaa,fi eenyummaa Oromoo tiksanii ti.
Ummanni Oromoo Oromummaa abbaa argetti hin kennu. Namichi kaleessa ka’ee ‘Oromummaan saba Oromoo xiqqeese,’ jedhe, har’a deebi’ee kana dubbachuutti saalfachuu qaba. Oromummaa himachuu hin danda’u. Yoo himachuu barbaade immoo badii hojjateef, badii dubbateef dhiifama gaafatee, gaafa ummanni dhiifama godheef, Oromummaa balfe snatti deebi’uu danda’a.
Kanaan achi, gowwaa kee barbaadi, nuti warra afaaniin nu soban, gochaan nu goban miti.
Nutis kaayoo qabna; qarumama qabna!
Namni kun Garg.Piroofeeseraa Tashoomee Guuttataa jedhama. Tika mootummaa Abiyyi dhaan ukkamfamee jira . Yunivarsiitii Wallaggaatti B/saa Afaan Ingiliziiti, barreessaa hog-barruu Oromoo:Furtuu Gumaa, Kana Kan Dubbii ta’e,.. kitaabolee jedhaman kan maxxanse, qorataa beekamaa joornaalota hedduu sadarkaa idila addunyaatti kan maxxansedha.
Hata’u malee yeroo ammaa namni kun sababuma hayyuu Oromoo ta’e qofaaf dararama keessa gales jira. Kan nama dinqu gaafa dhaqanii ukkaamsani akka hattuu kitaaba inni barreesse akka hattuu baachisanii deemani. Kitaaboleen kun bara TPLF isa hingaafachiifne. Kanaaf mee sagalee ta’iif jedha ergaa Leeqaa Na qaqaabe.
Thi is Finfinne, Oromia.
This is a tree planted by OLF leader, Dawud Ibsa; This tree will be named as “Oromo Liberty Tree”.
One day, Oromo will sit under this shade; Oromos of all backgrounds would sit and talk about their liberty.
Dhiiga Oromootiin aagoo koranii deebi’anii Oromoo dhiiga dhaabaa, gaaf Abdii kutatan Oromoo kiyya, q